Iyini izindleko ze-SEO ngalunye lokukhomba ngamagama angukhiye?
Namuhla, cishe wonke amabhizinisi adinga ukunquma ukuthi kufanele azinike imali engakanani ekusebenziseni injini yokusesha. Njengoba wonke umuntu eqaphela ukuthi i-SEO iFANELE ngokusinda kwebhizinisi, ilungele ukusebenzisa imali enkulu yenzuzo yabo kumasevisi wokuthuthukisa. Kodwa-ke, umthengisi ozobe e-inthanethi kufanele ahlele isabelomali sakhe. Yingakho kubalulekile ukuba aphendule umbuzo othi "Uzochitha malini e-SEO?" Yiqiniso, ayikho impendulo eqondile kulo magazini. Ukusebenza kwe-injini yokusesha akulula ukukala imisebenzi eminingi yokumaketha ingathinta ithrekhi yosesho oluphilayo. Ngaphezu kwalokho, izindleko zezinsizakalo ze-SEO zingase zithembele emivuzo engaba khona. Isibonelo, ukubeka izwe jikelele ngamagama angukhiye amakhulu okuncintisana lapho i-SEO ibiza ngegama elingukhiye elingaba ngu-$ 10 kuzoba nezindleko ezithe xaxa ezihlobene nayo kunokuba zibeke igama elingukhiye eliphansi lokuncintisana. Kusho ukuthi indawo yendawo yomkhankaso wakho wokwenza ngcono izoba nethonya kumanani wokugcina.
Kulesi sihloko esifushane, ngizokuphendula umbuzo othi "Uzochitha malini ku-SEO?". Ngaphezu kwalokho, ngizokunika amathiphu awusizo mayelana nokuthi ama-eO agxile kanjani ukukusiza ukuthola imiphumela engcono kakhulu ye-SEO.
Amamodeli wokukhokha we-SEO
Ukukusiza ukuthi ukhethe okuhlukile kokuhlelwa kwesabelomali okwenziwe ngewebhusayithi yakho, nganquma ukukhombisa amanye amamodeli okukhokha asetshenziswa ama-SEO.
Ngokwemodeli yokukhokha, kudingeka ukhokhe imali yenyanga yesevisi yenkampani yokwenza injini yokusesha ikunikeze. Azikho izindleko ezengeziwe kwikhokheji ye-SEO yanyanga zonke. Udinga nje ukukhokha izinsizakalo eziningi zokuvumelanisa. Imali yenyanga yonke ye-SEO yindlela elula kunazo zonke yokukhokha njengoba inikeza ithuba ngokuqhubekayo ukuthuthukisa i-website rankings nokuphakamisa ukubuyiselwa kwezimali. Izinsizakalo zenyanga zivame ukufaka imibiko ye-analytics, isiphakamiso esisha segama elingukhiye, ukwakha isixhumanisi nokuthuthukiswa kokuqukethwe kwesayithi.
. Ngokuvamile, lolu hlobo lwezinsizakalo lunenani elinqunyiwe. Ngokujwayelekile, ngaphambi kokuba abanikazi bewebhu bekulungele ukubandakanya ukugcina kwenyanga, bazokhetha amasevisi enkontileka abafuna ukuyigcwalisa. Zonke izinkokhelo zamasevisi, kanye nezindleko ze-SEO ngegama elingukhiye, zifakwa kwisayithi ye-ejenti yokuthuthukisa. Ngakho-ke, ungahlola konke ngaphambi kokwenza umyalelo. Njengesibonelo sezinkontileka zezinkontileka, ngiyakwazi ukubhala ucwaningo lwegama elingukhiye, ukuhlaziywa kokuncintisana, nokulungisa amaphutha kuwebhusayithi.
Amanani asekelwe ephrojekthi
Amaphrojekthi ngokwezifiso adalwe ngokukhethekile ngezidingo zamakhasimende intengo yabo ingahluka kuye ngobukhulu beprojekthi, i-market niche kanye ne-complex complex project. Ngokujwayelekile, izimali zeprojekthi zifana nezinsizakalo zezinkontileka. Abanikazi bebhizinisi kanye ne-SEO ejensi banquma ukulinganisa nezindleko zeprojekthi ethile. Ukusekelwa ngokusekelwe kwephrojekthi kuyindlela engcono kakhulu yebhizinisi lendawo noma lamuva eliqalisiwe njengoba kusiza ukuthuthukisa ubukhona be-intanethi bese uheha ithrekhi yekhwalithi. Ezinye izinhlangano ze-SEO zihlinzeka ngemisebenzi yokubonisana ukuze kusize abanikazi bewebhu ukuba bathuthukise ezinye izakhi ze-SEO kumasayithi abo futhi bakhe ukulungiswa okuwinawo
umkhankaso ngokwabo. Lolu hlobo lwezinsizakalo lunemali yehora Source .